MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » President of Myanmar has appointed U Win Myint , as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Islamic Republic of Pakistan
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Win Myint, Ambassador at the Embassy of the Republic of the Union of Myanmar in Singapore, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Islamic Republic of Pakistan.
Dated. 18 May 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ် ဦးဝင်းမြင့်အား ပါကစ္စတန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက်